पूर्व एमाले गुटलाई ‘लडाएर’ रमिता हेर्दै प्रचण्ड ! – Dainik Sangalo
पूर्व एमाले गुटलाई ‘लडाएर’ रमिता हेर्दै प्रचण्ड !
June 30, 2020 216
पोखरा । जनता को’रोनासँग लडि’रहेका बेला सरकार भने आफ्नै पार्टी नेकपामा आन्तरिक बि’वादमा लडिरहेको छ । नेकपाको विवाद यतिबेला भुसको आगो जस्तै छ । लकडाउनका कारण घरमै थुनिएका जनाता सरकारबाट केहि राहात मिल्ला भन्दापनि नेताहरूको ल’डाइ हेर्न बाध्य छन् ।
अहिलेको समय सरकार को’रोनासँग भन्दा बढी पार्टीभित्रै लड्न बाध्य छ । आन्तरिक गुटका कारण नेकपा भित्रभित्रै कमजोर बन्दै गइरहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको ‘शक्तिशाली’ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री सत्ताच्युत हुनसक्ने कुराले त्रसित छन्।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन अनेक प्रपंच रचिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग उनको लडाइ जारी छ ।
कुनै बेला माओवादीका कट्टर आलोचक मानिने ओली नाटकीय रूपमा त्यही माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरिदिएपछि कतिपयले यसलाई ‘अस्वाभाविक’ पनि भनेका थिए। तरपनि पार्टी एकिकरण भयो र सरकार समेत संचालन गरिरहेको छ । तर अान्तरिक खिचातानी भने निरन्तर छ ।
पहिला केपी ओलीसँग मिलेर माधव नेपाललाई पछि पार्न खोजेका प्रचण्ड अहिले माधव नेपालसँग मिलेर ओलीलाई सिध्याउन खोजिरहेको आ’रोप स्वंय नेकपाका नेताहरू लगाउछन्। कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता त प्रचण्डले पूर्व एमाले गुटलाई ल’डाएर रमिता हेरिरहेको बताउछन् ।
नाकाबन्दीका बेला ‘राष्ट्रवादी’को छवि बनाएर जनतामाझ लोकप्रिय भएको ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वको अन्त्य प्रचण्डले नै गरिदिएका थिए। रातारात ओली नेतृत्वको हलो अड्काएर कांग्रेससँग साँठगाँठ गरी ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने प्रचण्ड नै थिए।
तरपनि प्रतिपक्षमा रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीले माओवादीलाई कांग्रेससँग अलग्याउँदै चुनावी गठबन्धन बनाएर पार्टी एकतासम्म आइपुग्दा ओली र प्रचण्डको घनिष्ठता अविश्वसनीय तर अद्भूत थियो।
पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाल पक्षलाई कर्नरमा परेका थिए। त्यो बेला प्रचण्डको रोजाइमा माधव नेपाल होइन, केपी ओली थिए। हुँदा हुँदा ओली र प्रचण्ड मिलेर माधव नेपाललाई दिएको वरिष्ठ नेताको उपाधि खोसेर झलनाथ खनाललाई दिएका थिए। माधव नेपाल पार्टीमा अपमानित नै भएका थिए।
अहिले सरकारले जारी गरेको दुई वटा अध्यादेश पछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सोही अध्यादेशलाई आधार बनाएर प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको ओली निकट नेताहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।
कुनै बेला पार्टीभित्र कर्नरमा पारिएका नेता नेपाल दुईअध्यक्षबीच दूरी बढेको बेला निर्णायक हुने गर्छन्। अहिले माधव नेपालले जसलाई समर्थन गर्यो त्यही पक्ष बलियो हुने अवस्था छ। त्यही भएर ओली र प्रचण्ड पक्षधर नेता नेपाललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन लागिपरेका छन्।
हुन पनि प्रचण्ड पार्टी एकतापछि ओलीको छायाँमा परेका छन् । दशकसम्म नेपाली राजनीतिको निर्णायक स्थानमा रहेर सक्रिय रहेका प्रचण्डको सक्रियता पार्टी एकीकरणसँग घट्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि प्रचण्ड आफैं निष्क्रिय हुन चाहेको नभइ उनका लागि त्यस्तो किसिमको भूमिका नभएकाले उनी छायाँमा परेको देखिन्छ।
प्रचण्डले आफ्नो पक्षका सबै नेता, मन्त्री र सांसदलाई एक ढिक्का राख्दै पूर्व एमालेभित्रको गुट लडाएर आफू बलियो हुने खेलमा रहेको पूर्व एमालेका नेताहरू बताउछन् । पूर्व माओवादीभत्र अहिलेको अवस्थामा गुट छैन, प्रचण्ड मात्रै एक्लो नेता हो, त्यही भएर अहिले उहाँ पूर्व एमालेभित्रको गुटमा खेलेर पार्टी कब्जा गर्ने दाउमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार र पार्टी दुवैतर्फ ओलीको सक्रिय नेतृत्वका कारण भूमिकाविहीन बन्न पुगेका प्रचण्डले पछिल्लो समय कोरोनाभाइरससँग लड्नको लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने चाहना सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो चाहना पनि पूरा हुन नदिइएपछि प्रचण्ड आफैं बलियो हुने मनस्थितिमा पुगेका छन् । यसका लागि प्रचण्डले पहिले पार्टीभित्र पुर्व एमालेलाइ लडाएर बलियो हुने र सरकारलाई कमजोर पार्दै अघि बढ्न खोजेको पूर्वएमालेको बुझाइ छ ।।
Prevसरकारले किन्ने भो सलह किरा, एक किलोको मूल्य कती ?
Nextआखिर ! जीवनको भरोसा गाउँ नै रहेछ